Home Wararka Qodobo hordhac ah oo la isku afgartay, iyo faragelinta Fahad & Farmaajo...
Qodobo hordhac ah oo la isku afgartay, iyo faragelinta Fahad & Farmaajo oo sii kordheysa
Madaxda Soomaalida ee magaalada Muqdisho uga arrinsanaya xalka khilaafka doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxay afartii maalmood ee lasoo dhaafay ee wadahadaladu u socdeen isku-afgartey afar qodob, walow aan heshiis dhab ah laga gaarinm iyadoo laga filaayay afar maalmood kaddib in la helo heshiis, balse weli la isku maaweelinaayo is-afgarad.
Xubno si weyn ugu dhuun-daloola wadaxaajoodyada oo la hadlay MOL ayaa noo sheegay in qodobada ay sida horudhaca ah isugu raaceen aay kala yihiin:
In qadiyada gobolka Gedo lagu xaliyo soojeedinta wadahadaladii ka dhacay caasimada ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Baydhabo.
In is-mari-waaga xulista wakiilada Somaliland lagula xaliyo isla soojeedintii Baydhabo (oo ah in labada dhinac ee isku haya ay xubno isku mid ah ku yeeshaan nidaamka)
In ay shir guud isugu yimaadaan madaxweynaha waqtiga ka dhacay Farmaajo, ra’iisul wasaaraha xilgaarsiinta, Rooble, iyo madaxwayneyaasha maamul goboleedyada.
In munaasabada lagu saxiixayo heshiiska wadahadalada Afasiyooni ay kawada ka qeybgalaan isla markaana hadaljeedin ka sameeyaan dhamaan daneeyeyaasha.
Sida MOL aay ogaatay waxaa shalay iyo maanta aad u kordhay faragelinta aay shirka ku hayaan Fahad Yasin iyo Farmaajo oo wakiilo aay soo dirsadeen shirka fadhiya, kuwaasoo kala ah. Cabdiraxmaan Dheer iyo Maxamed Carab oo labadaba ka tirsan golaha wasiirada Rooble.
Is af-garadka ayaa aay u badan tahay in heshiis buuxa laga gaaro maalinta Khamiista todobaadkan oo taariikhdu tahay 27-da bishan May, 2021.
Heshiiska ayaa waxaa la filayaa in ay kasoo muuqdaan jadwalka doorashooyinka oo kalkii hore loo balansanaa 8-dii Febraayo, 2021 balse dib-u-dhac weyn uu ku yimid markii heshiiskii horey uu ka fuli waayey dhanka maamulka Farmaajo, sida ay sheegeen mucaaradka iyo qaar kamid ah maamulada.